နုပျိုကျန်းမာမှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတို့ ပြုလုပ်နေကျ လေ့ကျင့်ခန်းများ - MyStyle Myanmar
မကြာသေးခင်ကမှ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ဂျပန်နိုင်ငံက လူလေးယောက်ထဲက ၁ ဦးနဲ့အထက်ဟာ အသက် ၆၅ နှစ်နဲ့အထက်ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာ နေထိုင်နိုင်ခြင်းဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုပြီး ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အာဟာရညီမျှတဲ့အစားအစာတွေကို နေ့စဥ်စားသုံးကြပြီး လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ပေးကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြေဖျောက်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာပဲလို့ ယူဆတဲ့အတွက် ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ပြီး နုပျိုငယ်ရွယ်စေဖို့အတွက် ဂျပန်လူမျိုးတို့ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပြီး လုပ်ရတာလည်းမခက်လို့ နေ့စဥ်မှန်မှန်လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။
ထိခိုက်မှုတွေမရှိဘဲ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ့ပေါ့ပါးပါးလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းပဲလုပ်လုပ် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း အရင်ဆုံးလုပ်ဖို့က အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို မတ်မတ်နေပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ခေါင်းပေါ်ညှင်သာစွာ မြှောက်လိုက်ပါ။ လက်မြှောက်ရင်းနဲ့ ခါးကြောကိုလည်း ဆန့်လိုက်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အောက်စီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်ရှိမယ်ဆိုရင် ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေဖယ်ရှားရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့လည်း ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်မြှောက်လိုက် အောက်ချလိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ပေးပါ။ နှစ်ကြော့လုပ်ရပါမယ်။
ကြွက်သားထုထည်အများစုက ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာပဲ ရှိတာများတဲ့အတွက် ခြေသလုံးကိုလည်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမှာပါ။ ဒူးကွေးလိုက်ပြီး အသက်ပြင်းပြင်းရှုလိုက်ပါ။ ခြေဖျားထောက်ပြီး ခြေသလုံးကြွက်သားတွေကို ညှစ်လိုက်ပါ။ ထိုအနေအထားအတိုင်း ခြေထောက်ကို ပြန်ချလိုက် ပြန်ထောက်လိုက်နဲ့ ၈ ကြိမ်လုပ်ပေးရပါမယ်။
လက်နှစ်ဖက်ကိုအရှေ့သို့ဆန့်ထုတ်လိုက်ပြီး လက်သီးဆုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း Rotate လှည့်ပေးပါ။ ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးခြင်းက သွေးလေလည်ပတ်အားကောင်းစေပါတယ်။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း လက်နှစ်ဖက်ကို ထောင့်ဖြတ်အနေအထားအတိုင်း မြှောက်လိုက်ပါ။ ရင်ဘတ်ကော့ကာ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ ပြီးရင် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဆက်တိုက်လုပ်သွားပေးပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုတော့ လေးကြော့လုပ်ရပါမယ်။
6. Heighten your reflexes.
ပုံထဲကလို လက်နှစ်ဖက်ကို ပခုံးမှာထိပြီး အပေါ်ကိုမြှောက်ကာ အကြောဆန့်လိုက်ပါ။ လက်ကိုပြန်ချတဲ့အခါ ပုခုံးကိုအရင်ထိပြီးမှ အောက်ကိုချပါ။ နှစ်ကြော့လုပ်ပေးရပါမယ်။
အသက်ကိုပုံမှန်ရှူပါ။ လက်နှစ်ဖက်ကို အရှေ့ဆန့်ထုတ်လုပ်ပြီး ခါးကနေ ဘယ်တစ်လှည့်၊ ညာတစ်လှည့်စီ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို လှည့်ပေးပါ။ ဘယ်ဖက်ရော ညာဖက်ရောကို နှစ်ကြိမ်စီလုပ်ပေးပါ။
MyStyle Myanmar2022-01-22T12:38:09+06:30January 22nd, 2022|Fitness, လေ့ကျင့်ခန်းများ – Workout Plans|